Miyuu Erling Haaland ka tagi karaa Dortmund bisha Janaayo kaddib markii xilli hore laga soo reebay Champions League? – Gool FM
(Dortmund) 01 Dis 2021. Erling Haaland ayaa su’aal laga keenay sii joogistiisa Kooxda Borussia Dortmund, kaddib markii xilli hore laga soo reebay tartanka Champions League.
Koox waliba waxa ay doonaysaa inay la saxiixato Erling Haaland, laakiin cid kasta waxaa kaga baahi badan haatan Kooxdiisa Borussia Dortmund.
Real Madrid, Manchester City iyo Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha doonaya saxiixa xiddiga xulka qaranka Norway, laakiin su’aasha la is-weydiinayo ayaa ah kooxda Bundesliga ka dheesha ma u ogolaan doontaa inuu ka tago suuqa jiilaalka.?
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Weeraryahankan Haaland ayaa ku dhammaystay halka ugu sarreysa ee gooldhalinta tartanka Champions League.
Xilli ciyaareedkan, waxa uu seegay saddex kulan sababo dhaawac, waxaana Dortmund ayaana laga soo reebay tartankan Champions League kaddib maqnaanshihiisa, iyagoo ku soo haray heerka guruubyada kaddib markii guuldarro weyn oo 3-1 ay kala kulmeen Kooxda Sporting C.P. kulankii ka dhacay Magaalada Lisbon.